Shiinaha 330kV Khadka Gudbinta Korontada Soosaarka iyo Warshada |Tower XY
XYTower： mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah warshadaha tower-warshadaynta ee galbeedka Shiinaha.
Soo saaraha Shiinaha & dhoofiyaha ee munaaradda korantada sare iyo qaab dhismeedka birta, weydii faahfaahin dheeri ah hadda!
Bandhiga Mashruuca Line Tower ee Gudbinta
munaaradda gudbinta waa qaab dhismeed dheer, badiyaa munaarad shabag ah oo bir ah, oo loo isticmaalo gudbinta iyo qaybinta korontada.Waxaan alaabtan ku soo bandhignaa annagoo kaashanayna xoog-shaqaale dadaalaya oo khibrad ballaaran u leh arrimahan.Waxaan mareynaa sahaminta khadka tifaftiran, khariidadaha dariiqyada, muujinta munaaradaha, qaab dhismeedka jaantuska iyo dukumeentiga farsamada inta aan bixineyno alaabtan.
Alaabtayadu waxay dabooshaa 11kV ilaa 500kV halka ay ku jiraan munaaradaha kala duwan tusaale ahaan munaaradda laalista, munaaradda cidhiidhiga ah, munaaradda xagasha, munaaradda dhamaadka iwm.
Intaa waxaa dheer, waxaan weli haynaa nooca munaaradda oo aad loo qaabeeyey iyo adeegga naqshadeynta oo la bixiyo inta haddii macaamiishu aysan haysan sawirro.
Magaca alaabta 330KV Taawar Gudbinta Korontada
Heerka korantada 220kV/330kV
Adeegga Golaha Tower Prototype ee bilaashka ah
isu imaatinka munaaradda prototype waa hab aad u dhaqameed laakiin wax ku ool ah oo lagu baadho in sawirka tafatiran yahay sax.
Xaaladaha qaarkood, macaamiishu wali waxay rabaan inay sameeyaan isu-ururinta munaaradda tusaalaha ah si loo hubiyo in tafatirka sawiridda iyo samaynta ay OK tahay.Sidaa darteed, waxaan weli siinaa adeegga isu-ururinta munaaradda prototype oo bilaash ah macaamiisha.
Adeegga isu-ururinta munaaradda tusaalaha ah, XY Tower waxa ay ballan qaadaysaa:
Xubin kasta, dhererka, booska godadka iyo isdhexgalka xubnaha kale ayaa si sax ah loogu eegi doonaa taam ahaanshahooda;
• Tirada xubin kasta iyo boolal kasta si taxadir leh ayaa looga eegi doonaa biilka alaabta marka la ururinayo prototype;
• Sawirada iyo biilka alaabta, cabbirada boolal, buuxinta iwm waa la eegi doonaa haddii qalad la helo.
Qayb kasta oo ka mid ah alaabtayada waxaa lagu calaamadeeyay si waafaqsan sawirka faahfaahsan.Koodh kasta waxaa lagu dhejin doonaa shaabad bir ah oo ku taal gabal kasta.Marka loo eego koodka, macaamiishu waxay si cad u ogaan doonaan hal gabal oo ka tirsan nooca iyo qaybaha.
Dhammaan qaybaha si sax ah ayaa loo tiriyey oo lagu baakadeeyay iyadoo la marayo sawirka taasoo dammaanad qaadi karta inaan hal gabal maqanayn oo si fudud loo rakibo.
Hore: 220kV Double Loop Gudbinta Tower
Xiga: 132kV Double Circuit Tower Toosan